Parkside flat kumbindi welali - I-Airbnb
Parkside flat kumbindi welali
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSonia
Indawo ecocekileyo nepholileyo kanye entliziyweni yeSutton. Kumgama wokuhamba kuzo zonke izinto eziluncedo kunye nepaki/iphuli kamasipala. Imizuzu emi-5 ngemoto ukusuka eMont Sutton ski resort, ukukhwela intaba kunye neendlela zebhayisekile ezityebileyo. Indawo egqibeleleyo yabahambi ngebhayisikile kunye nebhafu entle eshushu yokungena emva kosuku lwemisebenzi.
Indawo yokuhlala inomnyango owahlukileyo ukusuka kwindlu onikezela ngasemva kweyadi. Ibekwe kufutshane nepaki kamasipala enebala lebhola ekhatywayo, iqula lokuqubha, iinkundla zentenetya, idayimani ye-baseball, ihoki yedekhi, ipaki yokutyibiliza kunye nebala lokudlala. Kukwakho iindlela zokuhamba/iibhayisekile ezihamba ubude belali. Zonke iindawo zokutyela, ii-pubs/micro-breweries, iminyhadala yenkcubeko kunye neevenkile zikumgama wokuhamba. I-Mount Sutton ski resort kunye nokunyuka intaba / iindlela zokuhamba ngebhayisekile kukuhamba ngemizuzu emi-5 kuphela.
Iindwendwe ezihlala kwiflethi zinebhafu eshushu kwaye ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo. Kukho umbhede wendlovukazi kwigumbi lokulala kunye ne-closet eninzi kunye nendawo yokugcina kwaye kukho i-sofa yokukhupha i-sofa kwigumbi lokuhlala, elilungele abantwana abayi-1-2 okanye umntu omdala.
4.79 · Izimvo eziyi-161
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ungathumela umyalezo kum. Ukuba ndisekhaya, ndizokubulisa ngovuyo ukuze ungene.